အဆိုပါ Sneaky တကြ် CPA ကတော့ 2.0 : သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကတော့ Create ရန်ကဘယ်လို - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
အဆိုပါ Sneaky တကြ် CPA ကတော့ 2.0 : သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကတော့ Create ရန်ကဘယ်လို
ခဏအရောင်းထုတ်ပေးဒါကတကြ် CPA ကတော့ Create ရန်ကဘယ်လို
မင်္ဂလာပါဤနေရာတွင် Francis ကနောက်တဖန်အဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်. ဒီမှာဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်းသင့်ရဲ့အလွန်ပထမဦးဆုံးဆောက်လုပ်ဖို့ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်သင့်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် Sneaky တကြ် CPA ကတော့.
အမြဲတမ်းကဒီမှာသင်တန်ဖိုးကိုနားမထောင်ခြင်းနှင့်ပေးရ. ဒါကြောင့်သင်ကမှာအချိန်မရွေးငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်မစိုးရိမ်ပါ [email protected]
Reminding : သင်သည်သင်၏ကတော့ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါ tools တွေလိုအပ်ပါတယ်
တစ်ဦးက site ကို (domain name ကို) နှင့် / သို့မဟုတ် clickfunnel
3 သို့4တကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှု
အဆိုပါထိပ်တန်း7သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကတော့ Build ရန်ခြေလှမ်းများ
namecheap အပေါ် domains များ Get
သင့်ရဲ့ hosting အကောင့် domains များချိတ်ဆက်ပါ
သင့်ရဲ့ Clickmagic မှ domains များချိတ်ဆက်ပါ
Connect ကို Rotate နှင့်သင့်ကတော့
Clickmagic သို့ကမ်းလှမ်းမှု Add
ငါဝယ်2domains များ (Rotate ဒိုမိန်းအဖြစ် clickmagic များအတွက်အဓိက site နှင့်အခြားဘို့တ). သူတို့ကပဲကုန်ကျ $5.76 ကိုယ့် .me ဘို့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
သင့်ရဲ့ Hosting အကောင့်စေရန်ဒိုမိန်းချိတ်ဆက်ပါ
ငါသည်ငါ့ဒိုမိန်းအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ hostnine သုံးပြီးတယ်. ငါကဒီမှာ domain name ကိုဆာဗာများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်ဖွင့်.
သင်ကပြုပါသို့မဟုတ်ရိုးရိုးသင့်ရဲ့ DNS ကိုတောင်းဖို့ဘယ်လိုမသိကြပါလျှင်သင့်ရဲ့ hosting ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပါ. သူတို့ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများရန်သင့်ဒိုမိန်းထောက်ပြဖို့ကူညီပေးပါမည်.
ထိုအခါလည်းရှိသင့်ရဲ့ဒိုမိန်းထည့်သွင်းရန်သင့်အထက်ရှိ cPanel ကိုသွား.
မတော်တပို့ခကျြမြား. အခုဆိုရင်သင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဒိုမိန်းပေါ်တွင် WordPress ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. မစိုးရိမ်ပါနဲ့, very easy or you can go to Youtube and search for « how to install wordpress »
အဲဒီနောကျသငျသညျကို install ရန်ရှိသည် Instabuilder သင်နှင့်အတူမလိုက်မသွားပါလိမ့်မယ်လျှင် clickfunnels. ဒီ plugin ကို install ဖို့အောက်ကခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ (ကအခမဲ့မဟုတ်ဘူး)
ကောင်းပါပြီ. ယခုတွင်သင်သည်အတိအကျကိုဖန်တီးရန် Instabuilder သို့မဟုတ် CLickfunnel ကိုသုံးပါ4pages like the ones below :
သင့်ရဲ့ Clickmagic အကောင့်စေရန်ဒိုမိန်းချိတ်ဆက်ပါ
ကျွန်တော်တို့ဟာဝယ်ဒုတိယဒိုမိန်းကိုရွေးချယ်ပါ. ဒါကကျနော်တို့ Clickmagic နှင့်အတူသုံးပါလိမ့်မယ်တင့်.
ပေါင်း www.clkmr.com. Wher you have the red bar. ကိုယ့်အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့အဘယျသို့ရှိယခင်ဒေတာအစားထိုးမည်. And you go to your Clickmagic account :
Tools များ / ဒိုမိန်း Manager ကို Click နဲ့ကျွန်မလုပ်ခဲ့တယ်တူသောအဲဒီမှာသင့်ရဲ့ဒုတိယဒိုမိန်း add. အထက်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ.
Then you have to create your rotator : Rotate ကိုကလစ်နှိပ်ပါ / ငါလုပ်ခဲ့တယ်နဲ့တူပုံစံပုံစံဖြည့်ပါပြီးရင်နယူး Rotate Create.
ကောင်းပြီရဲ့ buddy ပြုသောအမှု.
Connect ကို Rotate ပြီးတော့သင့်ရဲ့ကတော့
သင်တို့တွင်တကယ့်ကိုဂုဏ်ယူသင်ကလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ဤအပိုင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာသည်အထိအရေးယူယူခြင်းအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမ. သငျသညျအောင်မြင်မှုထိုက်နှငျ့သငျဝေးမဟုတ်ပါဘူး.
အခုဆိုရင်သင်ရုံ created သင့်ရဲ့ Rotate link ကို copy နှင့်သင့်ကတော့ထဲမှာ paste သွားပါ
စာမကျြနှာကိုအောက်ပါအဘို့အ action ခလုတ်အောက်မှာသင့်ရဲ့ link ကို Paste
Clickmagic သို့ offfers Add
ယခုသင်ပြုသမျှအားလုံးသည်သင့်ရဲ့ Clickmagic Rotate ၌သင်တို့၏တကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်သည်သင်၏ကတော့တစ်ခုခုမထိရန်မလိုပါ.
တစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုကွယ်လွန်ခဲ့လျှင်, သင်ရုံ clickmagic ထဲမှာမကတော့တိုက်ရိုက်အစားထိုး.
ဤတွင်ကျွန်မ Maxbounty ကွန်ယက်မှရှေးခယျြခဲ့တကြ် CPA ကမ်းလှမ်းမှုများမှာ.
ဒါကြောင့် ... နောက်တဖန် , သငျသညျပျောက်ခံစားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်, ငါ့ကိုမယ့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. ကျွန်မကူညီဖို့ဒီနေရာမှာပေါ့.
သငျသညျ dfy ကတော့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့.